बाहुनबादमा नारी उत्पिडनको पराकाष्ठा-कमला भट्टराई - Tamang Online
बाहुनबादमा नारी उत्पिडनको पराकाष्ठा-कमला भट्टराई
नारी उत्पीडिनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेकै बाहुनवाद हो। हिजो चन्द्रशमसेरका पालासम्म लोग्ने मर्दा स्वास्नीलाई पनि जिउँदै जलाइन्थ्यो।यो सबै कुकर्म हिन्दुधर्मका नाममा,बाहुनबादका नाममा भएको हो। लोग्नेसँगै स्वास्नीलाई जीउँदै जलाउनु ठिक थियो वा हो भनेर आज कुन बाहुनबादिले बताउन सक्छ? आईमाईलाई लोग्नेसगै मार्ने त्यस्तो चलन हिन्दुवादी बाहुनबादिमा बाहेक अन्यत्र थिएन।
सतीप्रथा बाहुनबादी नारी उत्पिडनको पराकाष्ठा हो।मर्न लागेका बुढासगँ बिहेगर्नुपर्ने, दुईभन्दा बढी श्रीमति राख्ने अनि बुढा मर्दा जिउदै जलिएर सति जानुपर्ने महिलाप्रती कत्रो दमन? हाल नेपालमा सतिप्रथाको अन्त्री भएपनी अहिलेसम्म सामाजिक संस्कारका नाममा महिलाले अनेकौ समस्याहरु भोगिरहनु परेको छ। बाहुनबादी नारी उत्पिडनको अर्को आयाम बिधवा प्रथा हो। बिधवा महिलालाई बिबाह गर्न मनाइ छ। कथम कदाचित कुनै पनि तरुनी महिलाले विबाह गरिन भने उनको जात घटाइन्छ र जैसी बनाइन्छ।
महिलाले ब्राह्मण सगै बिहे गरेर संन्तान भयो भने पनि उ ब्राह्मण भएर पुरोहित हुन पाउदैन।जैसी भनेका बाहुनबादबाट यसरी नै पीडित बनेका हुन् । युवा युवतीबिचको प्रेमको सबैभन्दा ठूलो शत्रु पनि बाहुनबादी समाज अनि परिवार हो । बाहुनको परिवारमा प्रेमलाई कुनै स्थान हुदैन । प्रेमबिबाहलाई बाहुनबादिले सधैं बिरोध गर्छन। प्रेम माथिको यहि कठोर बन्धनको कारणले गर्दा नै क्षेत्रिबाहुनका छोरी आत्महत्या गरेर मर्न विवश हुन्छन् ।बाहुनका छोरी किन झुन्डिएर मर्छन???यौन – प्रेममाथिको बन्धन र कुण्ठाकै परिणामले धेरै बाहुनका छोरी मर्ने गरेका छन् । बाहुनले आफ्ना छोराछोरीलाई सधै कडा अनुशासनमा राख्न खोज्छन् फलस्वरूप बिग्रन्छन।
बाहुनिको चरीत्र पनि बडो अचम्मको हुन्छ।बाहुनिहरु रुढिबाद, उपभोक्तावाद र प्रतिगमनका प्रतीक हुन् । घमण्डी लोभी दुच्छर, सानातिना कुरामा मन डुलाउने, कस्ले कस्तो खायो, कस्तो लगायो ,को सग उठबस गर्यो यस्ता कुरा सबैभन्दा पहिला बाहुनिको नाकले थाहा पाउँछ। परिवारमा राम्रो मेलमिलाप छ भने छोराले बिबाह गर्यो भने सबैभन्दा पहिले सासुबुहारिहरुबीच झगडा पर्छ। बाहुनका घरमा सासुले बुहारीलाई नोकरको व्यबहार गर्न खोज्छिन। बिस्तारै सासू- बुहारीबिचको झगडा नन्द भाउजू वा आमाजु बुवारिमा सल्किन्छ।
नारी स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठुलो बिरोधि बाहुनभन्दा पनि बाहुनी नै हुन्छन् । आफ्ना छोरिहरुले बाहिरफेर स्वतन्त्रतापुर्वक हिडँडुल गरेको नरुचाउनेमा बाहुनीनै अगाडि छन् । बुहारीलाई हेप्नमा पनि बाहुनभन्दा बाहुनी नै अगाडि छन् । जनआवाज बाट |
« जोशी एसएलसी फेल, संसदीय समितिमा बुझाएको प्रमाणपत्र नै झुटो (Previous News)
(Next News) मिलन पाख्रिन तामाङको ‘मोहनी मन्त्र’ भिडियो »